विराटनगरमा २ सय ७८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, तीनजनाको मृत्यु, ‘हटस्पट’ बन्यो विराटनगर - ePosttimes
Home१ नम्बर प्रदेशविराटनगरमा २ सय ७८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, तीनजनाको मृत्यु, ‘हटस्पट’ बन्यो विराटनगर
विराटनगरमा २ सय ७८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, तीनजनाको मृत्यु, ‘हटस्पट’ बन्यो विराटनगर
कोशी बाहेकका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १३:०० १ नम्बर प्रदेश, कोरोना, मूख्य समाचार 0
साउन-२५, विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को ‘हटस्पट’ जस्तै बनेको छ । शनिबार रातिसम्म विराटनगर महानगरपालिकामा २ सय ७८ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये तीनजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
६ साउनसम्म विराटनगरमा ३० जना मात्र संक्रमित थिए । उनीहरु भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु थिए । तर पछिल्लो १९ दिनमा विराटनगर महानगरपालिकाभित्र २ सय ४८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
अधिकांश संक्रमित ट्राभल हिस्ट्री छैन । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका विराटनगर-९ का दुई जना वडा नम्बर ५ का एक जनाको पनि ट्राभल हिस्टी भेटिएको छैन । ट्राभल हिस्ट्री नभएका धेरै संक्रमित भेटिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छर शनिबारदेखि विराटनगरमा लकडाउन गरेको छ । परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छ ।
शनिबारसम्म विराटनगरमा ३ हजार ५४५ जनाको पीसीआर जाँच भएको छ । दैनिक दुईसय जनासम्मको पीसीआर जाँचका लागि स्वाब संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशमा परीक्षण गर्ने क्षमता सिमित भएकाले स्वाब संकलन धेरै गर्न नसकिएको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले बताए ।
दुई अस्पताल सिल, दुईमा आकस्मिक सेवा सञ्चालन
विराटनगरमा संक्रमित हुनेमा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि छन् । महानगरभित्र संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ४८ भन्दा बढी रहेको विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि विराटनगरका चार अस्पताल सिल गरिएको थियो ।
विराटनगरको न्यूरो अस्पताल, गोल्डेन अस्पताल, विराट नर्सिङहोम र मोरङ सहकारी अस्पताल सिल भएका थिए । त्यसमध्ये न्यूरो र विराट नर्सिङहोमले आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरेका छन् ।
कुन अस्पतालमा कति संक्रमित ?
विराटनगरको कोशी अस्पतालमा हालसम्म १७ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा एक जना डाक्टर, ७ जना नर्स, ३ जना सफाई कर्मचारी, दुई जना प्राविधिक र अन्य प्रशासनका कर्मचारी छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीको संख्या घटेको छ । सेवाग्राहीको संख्या घटेपछि चिकित्सकले आवश्यकता अनुसारमात्र बिरामीसँग भेट गरिरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
विराट नर्सिङहोम (विराटनगर अस्पताल) का एक सेवाग्राहीसहित १३ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमित हुनेमा तीनजना डाक्टर र पाँचजना स्टाफ नर्स छन् भने अरु प्रशासनका कर्मचारी हुन् ।
न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा ८ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमा पाँच स्टाफ नर्स, एकजना डाक्टर र एक जना सफाइ कर्मचारी र एकजना सेवाग्राही छन् । न्यूरो अस्पतालले संक्रमण पुष्टि भएका आफ्ना स्टाफलाई आफ्नै आइसोलेसनमा राखेको अस्पतालका अपरेसनल डाइरेक्टर राजेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
गोल्डेन अस्पतालमा दुई स्वास्थ्यकर्मी र एकजना प्रशासनका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रशासन प्रमुख सन्तोष मेहताका अनुसार संक्रमितमध्ये एकजना इमरजेन्सी वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् । एक जना डाइलासिस विभाग र एक जना प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी हुन ।
मोरङ सहकारी अस्पतालमा पाँचजना कर्मचारीमा कोरोना देखिएको अस्पताल सञ्चालक विकास अधिकारीले बताए । संक्रमण देखिएपछि गोल्डेन र मोरङ सहकारीले बिहीबारबाट ओपीडी र इमरजेन्सी सेवा बन्द गरेका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजमा दुई जना डाक्टरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । दुई डाक्टरलाई कोरोना देखिएपछि नोबेल मेडिकल कलेजले ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ । विराटनगरको म्याक्स अस्पालका दुई सेवाग्राहीलाई कोरोना देखिएपछि अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ ।
विराटनगरमा संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत ३३ जना छन् । एक जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी छन् । संक्रमित प्रहरीमध्ये बिहीबारसम्म १७ जना निको भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिए ।
विराटनगरमा चारजना पत्रकारलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार तीन र शनिबार थप एकजनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
अस्पतालबाट समूहमा पुग्यो
विराट नर्सिङहोम सञ्चालक समेत रहेका चिकित्सकलाई ७ साउनमा संक्रमण देखिएको थियो । तर स्वाब दिँदा नाम र ठेगाना गलत लेखाएका कारण संक्रमितको पहिचान गर्न दुई दिन लाग्यो । गत ९ गते अस्पताल सिल गरी स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीको जाँच गर्दा १३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
विराटमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कोशी र न्यूरोमा पनि काम गरेको देखिएकाले दुई अस्पतालमा विराटबाटै संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिर बताउँछन् । पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो भएसँगै सीमा नाका पनि खुकुलो भएको थियो । खुला नाकाबाट भित्रिएकाहरुमार्फत समूहमा कोरोना संक्रमण पुगेको उनले बताए ।
प्रदेशमा कति संक्रमित ?
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार ३८३ पुगेको छ, जसमध्ये ९१० जना निको भइसकेका छन् । प्रदेशका १४ मध्ये सबैभन्दा बढी मोरङमा ५४२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनीहरु मध्ये चारजनाको मृत्यु भएको अनलाईन खबरमा समाचारमा छ।
446100cookie-checkविराटनगरमा २ सय ७८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, तीनजनाको मृत्यु, ‘हटस्पट’ बन्यो विराटनगरyes
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाको घोडेटारमा ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, गापामा सयौको संख्यामा संक्रमीत हुनसक्ने अनुमान उदयपुरमा भुल्केबाहिर पहिलो पटक संक्रमण देखीयो, संक्रमीत पत्रकार भएको पुष्टि प्रदेश १ सरकारले आइसोलेशन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र अस्पताललाई दियो १ करोड ६० लाख बजेट इटहरीमा थप ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, इटहरीमा संक्रमित संख्या १ सय २५ पुग्यो मन्त्री घिमिरे १७ दिनपछि कोरोनामुक्त वीपी प्रतिष्ठानमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुग्यो मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नेपाल समूह सहमत प्रदेश १ मा संक्रमित संख्या तिब्रगतिमा बृद्दी, आजमात्रै १२९८ थपिए
पथरीमा पत्रकारसहित ९५ जनाको पीसीआर परीक्षण